i-COVID-19 – UDAWN Umtholampilo
I-DAWN ivulekile futhi isebenza ngaphansi kwamahora ejwayelekile ebhizinisi. Siyaqhubeka nokunakekela iziguli zethu. Uma une-aphoyintimenti ehleliwe ku-DAWN, sicela uhlele ukugcina lokhu kubekwa NGAPHANDLE kokuzwa ku-DAWN Clinic noma uhlangabezana nezimpawu ezifana nomkhuhlane, ukukhwehlela, noma ukuphefumula okuncane.
Uma uyisiguli esithola lezi zimpawu, sicela ushayele eyethu Umugqa wokuqoqa umhlengikazi we-COVID-19 ku 303-800-9677 ext 504 .
Ngezansi kunemibuzo ebuzwa njalo ephathelene ne-COVID-19 njengoba ihlobene neziguli zethu kanye nomphakathi. Sibuyekeza leli khasi njengoba kutholakala eminye imininingwane.
Ngabe kufanele ngibe ne-aphoyintimenti, noma ngingangena njengokuhamba ngesineke?
Asisathathi hambo ezigulini. Noma ngubani ofuna ukubonwa, kufaka phakathi iziguli ezintsha, kufanele abize 303-800-9677 ext 504 isikhathi esibekiwe.
Ngingakwazi yini ukuletha izingane namalungu omndeni / abanakekeli lapho ngiqokwa khona(s)?
Sicela ugweme ukuletha izingane namalungu omndeni / abanakekeli lapho uqokwa khona.
Yini okufanele ngiyenze uma nginezimpawu ezibandayo noma zomkhuhlane?
Uma kufanele ubone iqembu lakho futhi unezimpawu ezisebenzayo, njengomkhuhlane, ukukhwehlela, noma ukuphefumula okuncane, noma ezinye izimpawu zokuphefumula kufaka phakathi isiminyaminya noma ikhala eligijimayo, sicela ushayele umugqa wethu we-COVID-19 we-triage line ku 303-800-9677 ext 504 ngaphambi kokuqokwa kwakho. Umhlengikazi uzonikeza umhlahlandlela wokuthi kufanele uye emtholampilo noma ulinde kuze kuphele izimpawu zakho.
Ingabe iziguli zihlolwe izimpawu zokuphefumula?
Yebo, zonke iziguli zihlolwe izimpawu zesifo sokuphefumula emnyango womtholampilo.
Ngabe kufanele ngigqoke imaski emtholampilo?
Kufanele ugqoke imaski emtholampilo kuphela uma uqondiswe ngabasebenzi. Lapho ungena emtholampilo ngomnyango wangaphambili, uzohlolwa izimpawu zokuphefumula. Uma abasebenzi benquma ukuthi unezimpawu, bazokunikeza imaski bese bekutshela ukuthi uyigqoka kanjani kahle. Uma igqoke kahle, buso bungasiza ukwehlisa ukusabalala kwamagciwane okuphefumula namagciwane.
Uma amalungu omndeni wami / abanakekeli nami ngingenawo umkhuhlane noma izimpawu zokuphefumula, kufanele sigqoke imaski esidlangalaleni?
Cha, uma ungenazo izimpawu, asikho isidingo sokugqoka isifihla-buso, ngokusho kwamaCentre for Disease Control and Prevention. Amaski enzelwe ukuvimbela iziguli ezibonisa izimpawu ekusabalaliseni izifo kwabanye. Kuhle ukuhlala ekhaya ukuze ugweme ukusabalalisa ukugula kwakho kwabanye.
Ngabe i-DAWN ihlola iziguli ze-COVID-19?
Kuphela uMnyango Wezempilo Yomphakathi Nezemvelo eColorado (CDPHE) ihlola iziguli. Uma uhlangabezana nenqubo yokuhlola ithimba lakho lezokwelapha lizosebenzisana ne-CDPHE ukuhlela lokhu. Ukuhlola akukwazi ukuqedelwa ngesicelo sesiguli.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi imiphumela ibuye?
Ngokuvamile, singathola imiphumela yokuhlolwa ye-COVID-19 24 uku 48 amahora.
Ngabe kukhona engingakwenza ukuzigcina, umndeni wami nabangane baphephile?
Izinyathelo ezibaluleke kakhulu okufanele zithathwe ziyefana nazo zonke izinkathi zomkhuhlane nemikhuhlane:
Hlala ekhaya lapho ugula. Zijwayeze ukuhlanzeka kwesandla nokukhwehlela bese uthimula imikhuba emihle ngokuthimula noma ukukhwehlela endololwaneni.
Gwema ukuxhumana eduze nabantu abagulayo.
Gwema ukuthinta amehlo akho, ikhala, nomlomo.
Hlanza futhi ubulale amagciwane ezintweni ezithintwa njalo nezindawo osebenzisa kuzo isifutho sokuhlanza indlu noma ukusula.
Hlela ukuthi uzowanakekela kanjani amalungu omndeni agulayo. Yenza izinhlelo zokunakekelwa kwezingane uma ugula noma uma ingane yakho igula. Yiba ne-thermometer ekhaya ukuze ubheke umkhuhlane uma wena noma othandekayo uzizwa ugula.